तपाईंसंग ओलिम्पियन बन्ने मानसिक गुण छ? - BBC News नेपाली
तपाईंसंग ओलिम्पियन बन्ने मानसिक गुण छ?
1 अगस्ट 2016
प्रश्न: तपाईंको मानसिक अवस्था ओलिम्पिक खेलाडीको जस्तो छ कि छैन?
स्वर्णपदक जित्नका लागि आवश्यक क्षमता तपाईंमा छ कि छैन, जान्नका लागि यो ६० सेकेण्डको प्रश्नोत्तरमा भाग लिनुहोस्।
तपाईंको उमेर कति?
प्रश्नोत्तरमा भाग लिनुहोस्
तपाईंले नयां ब्राउजरमा अपग्रेड गर्नुपर्छ
तपाईंं हचुवाको भरमा काम गर्नुहुन्छ कि यकिनका साथ?
मेरो काम एकदमै हचुवाको भरमा हुन्छ
मेेरो काम केही मात्र हचुवाको भरमा हुन्छ
म केही बीचमा पर्छु
सामान्यतया मेरो काम पक्का हुन्छ
मेरो काम पक्का हुन्छ
तपाईं एकदम सावधानीका साथ सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुहुन्छ भने तपाईं खेल जगतका साथै जीवनका विविध क्षेत्रमा पनि सफल हुन सक्नुहुन्छ।
११०% प्रयास गर्ने कि सजिलो खोज्ने ?
सधैं अत्यधिक प्रयास गर्ने
कहिलेकाहीं मात्र अधिकतम प्रयास गर्ने
म केेही बीचमा पर्छु
मलाई सजिलो उपायले तान्न खोज्छ
सधैैं सजिलो खोज्छु
आफ्नो व्यक्तिगत मापदण्ड उच्च राख्दा त्यसबाट उत्कृष्ट खेलाडीलाई सहयोग पुग्छ, तर आफूमाथि सधैं कडा रुपमा प्रस्तुत नहुन र अपेक्षाहरुलाई वास्तविक बनाइराख्‍न पन‌ि जरुरी हुन्छ।
अवस्था तनावपूर्ण हुंदा भिड्ने कि छाड्ने?
कडा रुपमा भिड्ने
तपाईं १०० मि. दौडको फाइनलमा आरम्भ रेखामा हुनुहुन्छ र लाखौं दर्शकको आंखा तपाईंमाथि छ भने त्यस्तो बेला, त्यो तनाव सहने क्षमता तपाईंमा छ? उत्कृष्ट खेलाडीहरु दबाबका बेला झन चम्कने गर्छन्।
तपाईं आफूलाई के ठान्नु हुन्छ, चम्किलो तारा कि लजालु लता?
एकदम चम्किलो तारा
म केह‌ी बीचमा पर्छु
म केही लजालु स्वभावको छु
ठूलो अहं पाल्नु व्यक्तिमा हुने राम्रा गुणमा पर्दैन तर ठूलो अहं भएका मानिसहरु एकदमै सफल खेलाडी बन्न सक्छन्। सबै उत्कृष्ट खेलाडीहरुमा त्यस्तो गुण भने हुंदैन। याद गर्नुस् अहंकारीलाई कसैले मन पराउंदैन।
प्रतिस्पर्धीसंग भिड्ने कि मुसा दौडबाट बाहिरिने?
मुसा दौड मेरा लागि होइन
म बाध्यात्मक अवस्थामामात्र मुसा दौडमा सहभागी हुन्छु
म प्रतिस्पर्धा रुचाउंछु
म प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छु
यदि तपाईं प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन र प्रतिस्पर्धीलाई हराउन चाहनुहुन्न भने ओलिम्पिक विजेता पन‌ि बन्न सक्नुहुन्न। प्रतिस्पर्धी भावनाले नै तपाईंमा रहेको उच्च क्षमतालाई बाहिर ल्याउन सघाउंछ।
तपाईं आफू नै आयोजक बन्नुहुन्छ की अरुको आयोजनाको सहभागी?
म आफै कामहरु शुरु गर्छु, अरुलाई किन कुर्नु?
म प्रयोग गर्न रुचाउंछु
त्यो सबै अवस्थामा भर पर्छ
म सामान्यतया अरुको निम्तो कुर्छु
म कहिल्यै केही आफै शुरु गर्दिन
प्रतिक्षा गर्दैमा राम्रो नतिजा हासिल हुन्छ भन्ने संधै सत्य हुंदैन। अवसर छोपेर अघि बढेमा मात्र सफल हुन सकिन्छ।
तपाईं खेलप्रतिको प्रेमका कारण प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनुहुन्छ कि भौतिक उपलब्ध‌िका लागि?
भौतिक उपलब्ध‌ि नै मेरो एकमात्र प्रेरणाको स्रोत हो
मुख्य प्रेरक तत्व भौतिक उपलब्ध‌ि हो
म खेलप्रतिको प्रेमभन्दा पनि अभिरुचि भन्न चाहन्छु
म खेेलप्रतिको प्रेमका लागि प्रतिबद्ध छु
प्राय: रोजगारीको विज्ञापनहरुमा सोधिन्छ - तपाईं कतिको उत्साही हुनुहुन्छ? त्यस्को पछाडी खास कारण छ। सफलताका लागि आवश्यक एउटा तत्व आन्तरिक प्रेरणा पनि हो।
सजिलो काम कि जोखिमपूर्ण काम?
जोखिमपूर्ण काम गर्न रुचाउंछु
म मेरो क्षमताको पूर्ण परीक्षण गर्न चाहन्छु
म आफ्नो सहजताको अवस्थामा नै ठिक छु
मैले यो गर्नै पर्छ र?
तपाईंले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धी फेला पार्न ऐना हेरे पुग्छ। तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत खेल प्रदर्शन र स्तरमा सुधार गर्न एकदमै उत्सुक हुनुहुन्छ भने, तपाईं अघि बढनसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
अघि बढ्ने कि पछाडि हट्ने?
मलाई आफूमाथि कहिल्यै विश्वास लाग्दैन
म त्यति आत्मविश्वासी छैन
म केही मात्रामा आत्मविश्वासी छु
हो म आत्मविश्वासी मानिस हुं
मेरो आत्मविश्वास अटल छ
खेल क्षेत्रमा सफलताका लागि आत्मविश्वास जरुरी छ। युसेन बोल्टलाई मात्र हेरे पुग्छ। तर अवस्थाहेरी आत्मविश्वासमा उथलपुथल समेत हुन सक्छ। त्यसैले विश्वविजेता युसेन बोल्टको आत्मविश्वासपनि कहिलकाहिं न्यून विन्दूमा पुग्ने गर्छ।
एकाग्र कि बिर्सिरहने?
प्रश्न के थियो रे?
दिउंसै सपना देख्‍ने
यहांसम्म त पुगियो...
मेरो ध्यान विरलै भंग हुन्छ
कतै अलमल नभईकन यहांसम्म पुग्नु भयो? एकपटकमा दिमाग केहि निश्चित कुराहरुसम्म मात्र केन्द्रित हुन सक्छ। त्यसैले महत्वपूर्ण कुराहरुमा ध्यान केन्द्रित गरेर एकाग्र हुन जरुरी छ।
एक्लै अघि बढ्ने कि अरुको सहयोग लिने?
म एक्लै अघि बढ्नेमा पर्छु। मलाई सहयोग चाहिंदैन।
सामान्यतया म एक्लै नै अघि बढ्छु
कुनै बेला म सहयोग माग्ने गर्छु
आवश्यक परेको बेला म संधै सहयोग माग्ने गर्छु
कोही पनि टापु जस्तो अलगथलग हुंदैन। सहयोग सबैलाई चाहिन्छ। सहकर्मी, परिवारजन,साथीसंगी, टोलीका सदस्य, प्रशिक्षक सबैले नै तपाईंलाई क्षमता बढाउन सहयोग गर्न सक्छन्।
लक्ष्य तोकेर अघि बढ्ने कि राम्रो नतिजाको कामना गरेर बस्ने?
उत्तम होस् भनेर कामना गर्ने
नयां वर्षमा मात्र लक्ष्य तय गर्ने गर्छु
म लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढ्ने गर्छु
हो लक्ष्य नबनाई म केही गर्दिनं
तपाईं जब आफूले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईंलाई आफू माथिको विश्वासमा पनि बृद्धि भएको अनुभव हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईंले आफूले सोचेभन्दा पनि बढी सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं शारीरिक रुपमा कतिको सक्रिय हुनुहुन्छ?
तपाईंको मानसिक अवस्था:
विदाको दिन हल्का टहलिने
आफ्नो नतिजा शेएर गर्नुहोस्
तपाईंको सबल पक्ष , , र तपाईंको .
तपाईंंले सुधार गर्न सक्ने पक्ष , , र तपाईंको .
गुणहरु हेर्न खण्डहरुमा क्लिक गर्नुस् गुणहरु हेर्न सम्बन्धित खण्डमा कर्सर लैजानुस्
प्रश्नोत्तरमा फेरि सहभागी हुनुहोस्
यो प्रश्नोत्तर लफबरो विश्वविद्यालयका खेल मनोविज्ञ डा. डेभिड फ्लेचरसंगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। यसमा भएका प्रश्नहरु प्रतिस्पर्धात्मक खेलकुदमा उच्चतम तहको प्रदर्शन गर्नका लागि जरुरी हुने मानसिक क्षमताहरु प्रष्ट पार्ने उद्देश्यले तयार पारिएका हुन्।
यसबारे थप सामाग्री